Home Wararka Dagaalka u dhaxeeya Ciidamada DFS iyo Al Shabaab ee Galmudug oo waji...
Dagaalka u dhaxeeya Ciidamada DFS iyo Al Shabaab ee Galmudug oo waji cusub galay
Dagaalka u dhaxeeya Ciidamada DFS iyo Al Shabaab ee Galmudug oo waji cusub galay ka dib markii Al Shabaab ciidamo cusub oo dheeraad ah ay soo dhigeen deegaano ka tirsan Galmudug. Taliyaha Ciidanka Dhulka Gen. Maxamed Tahliil Biixi ayaa sheegay in howlgallada ka socda Gobolka Mudug in ay ku qabsadeen Deegaannada kala ah Miliqo, Dabagalo,Cell Cabdi iyo kuwa kale oo hoostaga Degmada Xarardheere ee Gobolka Mudug.
Howlgalka wadajirka ah oo ay wadaan Ciidamada Xoogga Dalka & kuwa Daraawiishta DG Galmudug ayuu taliyuhu sheegay in maalmihii dambe guullo muuqda ay ka gaarayeen marka la eego dhulka ay qabsadeen. Taliye Biixi waxa uu Askarta iskaashaneysa ugu baaqay in ay kordhiyaan howlgalkooda ilaa inta ay ka tagaan goobaha bartilmaameedka u ah oo ay kamid tahay Magaalo Xeebeedka Xarardheere ee Gobolka Mudug.
Dowlada Federaalka iyo Maamulka Galmudug ayaa mudo badan sheeganaayay in ay Al Shabaab ka qabsadeen dhul balaaran, laakiin ilaa iyo hadda Dowlada Federalka sooma bandhigin hal degmo ama degaan oo ay qabsadeen Al Shabaab ama ciidan Al Shabaab oo ay gacanta ku soo dhigeen. Saraakiisha hoggaamineysa Ciidanka Dowladda Federaalka & DG Galmudug oo Warbaahinta la hadlay waxa ay ku dhawaaqeen in ay xoojiyeen howlgallada ay ka wadaan Gobollada Mudug & Galgaduud Bartamaha Soomaaliya.